တဲရော့များကပြောသော သဂျီးမင်းရဲ့ ကံကြမ္မာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » တဲရော့များကပြောသော သဂျီးမင်းရဲ့ ကံကြမ္မာ
တဲရော့များကပြောသော သဂျီးမင်းရဲ့ ကံကြမ္မာ
Posted by ေမာင္ရိုး on Oct 13, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Members | 20 comments
ပုံ – ၁ မိုးကြိုးပစ်ခံရသောရဲတိုက်
ဂမ္ဘီရ နဲ့ ဗေဒင်ဆိုတာ ဖျော်ဖြေတဲ့ နေရာကိုပို့ထားတဲ့ သဂျီးခိုင်အတွက်
တဲရော့များကပြောတဲ့ သူ့ကံကြမ္မာကို ဖွင့်ချလိုက်ပါတယ် ။
သဂျီးခိုင်နှင့်တကွ ဖတ်မိ ………
သဂျီးခိုင် အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ကဒ်သုံးကဒ် ဆွဲပါတယ် ။
အတိတ် ၊ ပစ္စုပ္ပန် ၊ အနာဂါတ် အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
ပုံ ( ၁ ) က အတိတ်အတွက်ဖြစ်ပြီး
ပုံ (၂ ) က လက်ရှိ ပစ္စပ္ပန် ပါ။
ပုံ ( ၃ ) က အနာဂါတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။
ပုံ -၁ အရ …
သဂျိုင်ခီး ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ မိုးကြိုးခ တဲ့ ရဲတိုက်ပါ ။
အောင်မြင်မှုတွေ ၊ ဩဇာအာဏာတွေ ၊ ပန်ခင်းလမ်းတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် မိုးကြိုးသွားလိုပြင်းထန်တဲ့ကြမ္မာဆိုး နှောင့်ယှက်ခံရပါမယ် ။
ကျန်းမာရေးအရ အထူးမဆိုးပေမယ့် ဆေးရုံတက်ရလုနီးပါးအခြေအနေတွေ ရှိခဲ့နိုင်ပါတယ် ။
စုစည်းမှုတွေ အေးချမ်းမေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်
(အေးချမ်းမေ = တစ်စစီကျိုးပဲ့နေတယ် သီချင်း )
ပူပြင်းလှတဲ့ အတွင်းမီးဟာ သဂျိုင်ခီး ကိုလောင်မြိုက်စေပါတယ် ။
ခရီးယာယီများပြီး စိတ်သောကရောက်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့ပါတယ် ။
ငွေသာကုန် အလုပ်မဖြစ် ၊ အလုပ်တော့ဖြစ် အကျိုးမရှိ တာတွေများခဲ့ပါတယ် ။
ပုံ -၂ အရ …
စိတ်ပေါ့သွမ်းရူးသွပ်သူတစ်ယောက် နိမိတ်ပုံ ကျလာပါတယ် ။
သူရူးတစ်ယောက်ဟာ ပျော်ရွှင်စွာတေးသီရင်းလျောက်လှမ်းရာမှာ ချောက်ထဲကို လျောက်လှမ်းနေမှန်းမသိ အပျော်ကြီးပျော်နေတဲ့နိမိတ်ပုံပါ ။
အရာရာကို မိမိစိတ်ထင်သလို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့တွေးနေရင် မှားပါလိမ့်မယ် ။
မမြင်ရတဲ့ရှေ့ခရီးမှာ ဂျွန်းထိုးမှောက်ခုံ ကျသွားနိုင်ပါတယ် ။
လေပြင်ကို မြေထင်ပြီးနင်းလိုက်ရင်တော့ လေထီးအဖြူလေးပါမှ သက်သာပါမယ် ။
လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတာဟာ ချောက်နှုတ်ခမ်းမှာ ခြေတစ်ဖက်လွတ်နေသလိုပါ ။
ရွှေထုတ်ထင်ပြီး ထမ်းထားတဲ့အထုတ်ကိုဖြေလိုက်ရင်တော့ အဝတ်စုတ်တွေထွက်လာမှာ ဧကန်ပါဘဲ ။
လက်ရှိလျောက်မယ့်လမ်းဟာ ချောက်ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါမယ် ။
ပုံ – ၃ အရ …
သိပ်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ သဂျီးခိုင် ……
သင့်ကံကြမ္မာအရ အနာဂါတ်မှာ ကြယ်တစ်ပွင့် လင်းလက်နေပါသေးတယ် ။
ဒါပေမယ့်လည်း ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်စီးပွါးကတော့ သမင်မွေးရင်းကျားစားရင်းဖြစ်နေဦးမှာပါ ။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ဖက်စပ်စီးပွါးလုပ်ဖြစ်ပါမယ် ။
တနည်းအားဖြင့် အမျိုးသမီး အကျိုးပေးကောင်းပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ အိမ်ထောင်မကျသေးသူဆိုရင် အိမ်ထောင်ကျကိန်း မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။
သဂျီးမင်းက အိမ်ထောင်ကျပြီးသားဆိုတော့ ………
( တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးလိုပါက ချက်ဘောက်တွင်မေးပါ )
အမျိုးသမီးများအား လမ်းမှာတွေ့လျှင် မိမိကဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါလေ ။
ယကြာ မရောင်းပါ ။
မဟာခရစ်ရှ်န အ ကာဠီဆာမိ
ပုံ -၁ မိုးကြီုးပစ်ခံရသောရဲတိုက်
ပုံ – ၂ လေပြင်ကို မြေပြင်ထင်နေသူ
ပုံ – ၃ ရေထဲကလာ ရေထဲသွား
ဟယ် သူကြီး ဘယ်တုန်းက တားရော့ကဒ်ဆွဲသွားတာလဲ
အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှ ငွေမြဲမလဲ ပါးစပ်တို့ နားတို့ မျက်စိတို့ အကုန် ပိတ်မှ ရမဲ့ ယတြာလား မသိဘူး
သဂျီးတော့ ဦးဆာကို ခ လာတော့မယ် ၊ ဟီး ဟီး
ဒါနဲ့ အနော့်အတွက်ကြည့်ပေးလို့ ရလား ဟင်
ကံဇာတာ ဂြိုလ်စီးနေလို့ပါ ၊
ဝတ္ထုထဲမှာပဲ မကျေနပ်သူကို ဂုတ်ချိုးရတဲ့ အခန်းက ပါအောင် ရေးပေးတော့။
ဗေဒင်ကဝိ ဥဆာမိ ရဲ့ အဟော အရ ..
သဂျီး ကို အကြံပေးချင်သည်မှာ …
မိန်းမ အကျိုးပေး ကောင်းမည်ဟု ဟောထားပါသောကြောင့် …
နောက်ထပ် မိန်းမ ရသလောက် ထပ်ပြီး ယူလျှင် ပိုပီး ကောင်းလိမ့်မည်ဟု ထင်မိဘာဂျောင်း …
သဂျော်ကတီးနှင့် ကွိုင်တက်လျှင်တော့ အနော်နှင့် မဆိုင်ဘာဂျောင်း …
ခုန က သူပြောနေတာ၊
ဘာတဲ့ “အမှုကြီးတွေရဲ့နောက်ကွယ်တိုင်းမှာ.. မိန်းမတယောက်ပါဝင်ပါတ်သက်နေရမယ်”… တဲ့..။
တဂျီး အမှု ကြီးနေပြီထင်တယ်။
ပြန်ဟော..ပြန်ဟော.. ကောင်းတဲ့အထိ.. တားရော့ကဒ်ပြန်ဆွဲဟော..။
အပျော်သဘော .. အပျော်သဘော … ခိခိ
The Fool’s Meaning
ကြွေဗေဒင်တို့. . .
တစ်ခါတည်း မလုပ်ပဲ ပြန်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ရင်ကော ဆိုတာမျိုး တွေးဖူးတယ်။
ဘယ်လိုမှ မလွဲနိုင်တဲ့ ဟောချက်ဆိုရင်
ဆယ်ခါ ကတ်ဆွဲလည်း ဒီဟောချက်ပဲ လာရမယ်
ကြွေ အခါတစ်ရာ ပစ်လည်း
အဲ့လို ပညာ အဲ့လို ကြမ္မာကို ထိပ်တိုက်တွေ ့ချင်တာ
အိုက်လို ဂဂျောင်ဂဂျိုးတွေးတဲ့ နေရာမှာ ဒညင်းဝက်နဲ့ နာနဲ့ အတော်တူတယ်…ဟိ
ခေးအော့သီအိုရီအရ.. တခါနဲ့တခါအချိန်ကာလကွာခြားတာမို့.. တူနိုင်စရာတော့မရှိ..
မြန်မာတို့ရဲ့မဟာဘုတ်လည်း.. အဲဒီအချိန်.. အဲဒီSpot လေးနဲ့ဟောတာ…။
ဟဲဟဲ ဗေဒင်ဆြာ ကွာစိ အဲ့ဆာမိဆိုပီးဟောခန်းဖွင့်မို့လားဟင်
ဟွန့် တဂျီးကိုတော့ တားရော့တွေဘာတွေတွက်ပေးလို့… လေးဆာမိနော်
ဂဇက်သဂျီး အယာတိုလာခိုမ်မေနီ သမီးတော် ထိပ်ထားလေး သန်ဆင်ခိုမ် နဲ့ အနော့် ကံကြမ္မာကိုလည်း တားရော့ ဖတ်ပေးပါဦး ကစာမိ ခင်ညာ….ညှောင်
မနေ့က ရွာထဲ ဝင်၊ အပေါ်က စ တွေ့တာတွေဖတ်ရင်း
ဒီ Post ကို ဖတ်မယ် လုပ်နေဖို့ ဝင်ရော အဝိုင်းလေး တစ်လည်လည် နဲ့ သူကြီး ဆာဗာကြီး ဂေါက်နေပါရော။
ဒါနဲ့ ကဆာမိ တားရော့ ကို မဖတ်ဖြစ်တော့ အဲဒီ အကြောင်း တွေ Google လုပ်ဖြစ်လိုက်ပါရဲ့။
ဒီမှာတင် အတော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါး တစ်ခု တွေ့လိုက်တယ်။
ကျွန်မလဲ အရင်က အဲဒီ ကဒ် တွေ ကို ကြောက်တယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မကောင်းတာတက် လာမှာကြောင့်ပေါ့။
လူတိုင်း ကတော့ ကောင်းတဲ့ဟာ လာစေချင်တာ သဘာဝ ဘဲလေ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ဆောင်းပါး လဲ ဖတ်ပြီးရော ဘာလာလာဗျို့။ မကြောက်ရေးချမကြောက်တော့ပါဘူး။
အဲဒီထဲ ပြောထားတာက ကာဒ် တွေ မှာ ကောင်းတဲ့ကဒ်၊ ဆိုးတဲ့ ကဒ် မရှိပါဘူး တဲ့။
ကဒ်ကနေ ပြလာတဲ့ ပုံပေါ်က အကြောင်း ကို သတိထားပြီး ကိုယ့် အတွက် အား အဖြစ်ပြောင်းနိုင်ဖို့ ဘဲ လိုတာပါတဲ့။
ကဒ် တိုင်း ဟာ အလင်း၊ အမှောင် တွဲနေတာပါတဲ့။
အဆိုး အကောင်း ရှိနေတာပါတဲ့။
အမှန်တော့ ဒါဟာ ကျွန်မတို့ ရဲ့ နေ့စဉ် လောကကြီး ထဲမှာ အမြဲ ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ အကြောင်း တွေပါဘဲ တဲ့။
ဥမပါ – သူကြီး ရဲ့ ပထမ ဆုံး ကဒ် – The Tower. လူ တွေကြောက် တဲ့ ကဒ်တွေထဲ က တစ်ခုတဲ့။
Disaster. Break-downs. Catastrophes. Chaos. Upheaval အဆိုးတွေပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အမှန်ဖြစ်သင့် တာက –
This is about beingacatalyst. A change agent. You’re here to make change.
ဒီတော့ အကောင်းဘက် ကို ပြောင်းဖို့ ဉာဏ်လေး ထုတ်၊ ဝီရိယလေး ရင်း လိုက်ရင် ပိုပြီး အောင်မြင်မှု ရနိုင်သပေါ့။
Death ကဒ် ကို တောင်မှ ဘယ်လို အကောင်းမြင်လို့ ရလဲ ဆိုတော့
Death can be powerfully positive card, not just representing change, butareminder that your life has value and limitless potential.
Don’t see it as an ominous, “creepy” card, butasign that there is much in life to appreciate.
အကောင်းကဒ် တွေ ကို အဆိုးယူလို့ ရတဲ့ ဥမပါ။
Six of Wands (Victory): Showing off, causing jealousy from others. Where there are winners there are losers!
သဘော က တော့ လောကကြီး မှာ ဘာဖြစ်ဖြစ် အကောင်းအဆိုး ရှိနေတာ ကို မြင်ဖို့ နဲ့ အဆိုး ဖြစ်လာရင် သင်ခန်းစာ ယူပြီး ပိုကောင်း အောင်လုပ်ဖို့
အကောင်းဖြစ်နေလဲ အောက်ခြေမလွတ်ဖို့ ကို ဒီ ကဒ် တွေ က တရာ ပြ နေတာဘဲ မဟုတ်လား။
အဖိုးတန် အတွေးဆင့်ပွါး လိုက်နိုင်လို့ ကျေးဇူးကြီးပါ ဆာဆာ ရှင့်။ :))
အဲဒီ ဆောင်းပါး အသေးစိတ် ဖတ်ချင်ပါက
ဟဲဟဲ တကယ်တော့ ကျနော်က ဘာဘာ ဘာမှမသိပါဘူးဗျာ ။
အခုလို အတည်တကျ ရှာဖွေမန့်ပေးတဲ့သဂျီးမင်းနဲ့အရီးကိုကျေးကျေးပါဗျို့ ။
အခြားသော ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုကွန်မန့်ပေးကြပါသော ရွာသူားများအားလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းးးး
တားရော့ကဒ်ကို လက်ဆောင်ပေးမလို့တောင်ကြံနေတာ..။ The Star ကိုသဘောကျလို့..
အစစ်က.. ဝတ်လစ်စလစ်မိန်းမပျို.. ဗျ..။
ဘာရယ်မဟုတ် ဆရာတစ်ယောက်ပြောတာလေးတော့သတိယမိသား ……
တားရော့ ကဒ်တွေကို နိမိတ်ဖတ်ဟောရင် အချိန်ကာလ အခြေအနေနဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်အာရုံပေါ်မှာဖြစ်တည်မှုနဲ့ ကဒ်ရဲ့ နိမိတ်ပုံကို ရောသမမွှေပြီးဟောပါသတဲ့ ။
ကဒ်တွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုအတိအကျ ယူလေ့မရှပါဘူးတဲ့ခင်ဗျ ။
အစပိုင်းလေ့လာကာစကတော့ကဒ်ရဲ့ညွှန်းဆိုချက်တွေကို အခြေခံပါတယ် တဲ့ ။
နောက်ပိုင်း ကဒ်နဲ့တစ်သားတည်းကျသွားတဲ့အခါမှာ ကဒ်ရဲ့သဘော ကဒ်ရဲ့ ဆိုလိုချက်ကိုပြောတယ်ဆိုပဲ ။
ဒါကြောင့် ဒီကဒ်ကိုလူနှစ်ယောက်ကိုဟောရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အလုံးစုံ မတူနိုင်ပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျ ။
ကဒ်တွေဝယ်ပြီးရင်လည်း သဂျီးမင်းအဓိဌာန်မပျက်ရလေအောင် ပို့လိုက်လို့ရပါကြောင်းးး
ဦးမာမွတ်ကတော့ ဂျန္နတ်ကို သွားမှာပါ… မယုန်မရှိနဲ့ ဓဂယ် ဒဂယ်…